MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-04-21
at 4/27/2013 10:05:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဇီးလွန် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် သုံးစွဲရန် ရေ အခက်အခဲ ကြုံနေရကြောင်း သိရသည်။
၎င်းဒုက္ခသည်စခန်းတွင် လူဦးရေ ၇၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ရေဘုံဘိုင် ၃ ခုဖြင့်သာ သုံးစွဲနေရသောကြောင့် ယခု ဧပြီလမှ စကာ ရေ အခက်ခဲကြုံနေရသည်ဟု ၎င်းဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ကူညီကြည့်ရှုပေးနေသော ဆရာ လဘန်အောင် (Sara Labang Awng) က ပြောသည်။
at 4/27/2013 12:08:00 AM No comments:
မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းတွင် အစိုးရတပ်များ တိုးချ
မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တိုက်ပွဲကြောင့် တစ်နှစ်ကျော် ပိတ်သွားသော တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး လိုင်ဇာ-မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းမ ပြန်ဖွင့်လာသော်လည်း အစိုးရတပ်များ ရုတ်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲ ပိုမိုတိုးချဲ့ထားကြောင်း သိရသည်။
ဗဟိုလုံခြုံရေး KIA တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေ ဘွမ်ရယ်ဘွမ် (Bum Re Bum)၊ နမ်ဆန်ယန် (Nam San Yang)၊ မဒီးယန် (Madi Yang)၊ ခယာဘွမ် (Hka Ya Bum)နှင့် ဘွမ်ဆောန်ဘွမ် (Bum Sawn Bum) အစိုးရ တပ်စခန်းများတွင် တပ်အပြောင်းအလဲလုပ်ကာ စစ်အင်အားများ ယခင်ထက် ပိုချထားသည်ဟု ရှေ့တန်းမှ KIA စစ်ဗိုလ်များ ပြောသည်။ ယခုလတွင်လည်း အလော့ဘွမ် (Alaw Bum) ရှိ ခလရ (၁၄၂) တပ်ကို နွမ်လန့် (Num Lang) အခြေစိုက် ခမရ (၄၃၈) တပ်ဖြင့် အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်ဟု ဆိုသည်။
at 4/26/2013 08:44:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျိုးစုပေါင်းစည်းရေး လုပ်ငန်းတွင် အကူအညီ ပေးနိုင်ရန် နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ယို့အိ ဆာဆာ ကာဝါ (Yohei Sasakawa) အား အထူးသံတမန် အဖြစ် ဂျပန်အစိုးရက ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ တာဝန်ပေး ခန့်အပ်မှုကြောင့် မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါသည် ဂျပန်အစိုးရ ကိုယ်စားပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမျိုးစု များနှင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ အစိုးရနှင့် လည်းကောင်း၊ တခြားနိုင်ငံ အစိုးရများနှင့် လည်းကောင်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်များ ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဒေသ၊ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ တိုက်ပွဲဖြစ်နေသော နယ်စပ်ဒေသ တိုက်ပွဲများကြောင့် နေအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသူ ဒေသခံများအတွက် ၎င်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် လူသားချင်း စာနာသည့် အထောက်အပံ့များ ပေးရာ၌ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကူညီ လုပ်ဆောင်လျှက် ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှ အကြီးတန်း သတင်းထောက် ကိုစောရန်နိုင်က ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ယို့အိ ဆာဆာ ကာဝါကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်တွင် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
at 4/26/2013 08:41:00 PM No comments:
at 4/26/2013 04:20:00 PM No comments:
at 4/26/2013 03:46:00 PM No comments:
at 4/26/2013 07:05:00 AM No comments:
မြစ်ကြီးနားမှာ ဆင်းကတ် ၃,၀၅၀၊ မိုးညှင်းမှာ ၁,၄၅၀ မဲဖောက်
တန်ဖိုးနည်း ဆင်းကတ်များအတွက် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အတွင်းမှ သာမန်ပြည်သူ ၉,၅၁၃ ဦး၏ လျှောက်လွှာများ လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက် ၂,၀၅၀ ခုအတွက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေမှစ၍ မဲနှိုက်ပေးနေသည်။
အစိုးရ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၂,၀၀၀ ကျော်၏ လျှောက်လွှာများအနက် ဆင်းကတ် ၁,၀၀၀ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့က မြို့နယ်ရုံးတွင် တာဝန်ရှိသူက လူထုအား ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ဝါရှောင်-ဆဒုံး-ကန်ပိုက်တီလမ်း ပြုပြင်နေချိန်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ထိန်ချုံးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း တရုတ်နိုင်ငံသား အယောက် ၄၀ ကို ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ သုံးလသက်တမ်း နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် Yellow Card(YC) ကို ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီကုမ္ပဏီရဲ့ မြစ်ကြီးနား-ထိန်ချုံးကားလမ်း ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့ဟာ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကို သုံးလနေထိုင်ခွင့် Yellow Card ကို အခမဲ့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာနရဲ့ ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းလွင်က RFA ကို ဒီကနေ့ အတည်ပြုပြောပါတယ်။
at 4/26/2013 06:44:00 AM No comments:
at 4/26/2013 06:43:00 AM No comments:
at 4/26/2013 06:40:00 AM No comments:
at 4/23/2013 08:59:00 PM No comments:
at 4/23/2013 02:08:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Sam Mung Daju KIA Dap Ba (4) npu na Dung (34) Ginra rai nga ai Kangming Bum hta KIA myu tsaw share ninghkring ni hte myen tai hpyen ni laja lana gap gasat nga ai gaw dai hte rai yang (4) ya rai sai lam shiga na chye lu ai. Dung (34) na KIA myu tsaw share ninghkring ni hte Kunglung, Sinli hkan na myen hpyen dap ni hte Kutkai Pyithutsit ni pawng hpawng nna gap gasat nga ai re lam hpe mung na chye lu ai. Ndai zawn gasat hkat nga ai kaw na myen hpyen la marai (5) dap hprawng hprawng mat ai majaw myen hpyen hpung ni grau nna gaya pawt pawt nga ai lam shiga na chye lu ai.
at 4/23/2013 02:06:00 PM No comments:
သမီးဖြစ်သူ သေဆုံးမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးရန် တိုင်ကြားမှု အပေါ် စစ်ဗျူဟာမှူးက မမှန်မကန် လိမ်လည်ရေးသား စွပ်စွဲသည်ဟု ဆိုကာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၁၁ ဖြင့် ပြန်လည်တရားစွဲ ခဲ့ရာ ရှေ့နေဌားခွင့်ပြုရန် တရားစွဲခံရသူ ဦးဘရန်ရှောင်က ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် လျှောက်ထားခဲ့သည်။
“ဒီနေ့က အမှုစစ်ဆေးခြင်း မရှိသေးဘူး၊ ဦးဘရန်ရှောင်က ရှေ့နေငှားဖို့ ရက်ချိန်းပေးဖို့ တောင်းဆိုတယ်”ဟုလ ဦးဘရန်ရှောင်၏ အမှုကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ကချင်လူထုကော်မတီမှ လူငယ်တာဝန်ခံ ကိုလရိမ်က
at 4/23/2013 09:33:00 AM No comments:
at 4/22/2013 09:10:00 PM No comments:
ကျပ် နှစ်သိန်းဖြင့် ရောင်းချခဲ့သော CDMA 800 MHz မိုဘိုင်း ဆင်းကဒ်များကို ကျပ် ၁,၅၀၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ရရန် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တနင်္လာနေ့မှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ လျှောက်လွှာများ စတင်ဖြည့်သွင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို တန်ဖိုးနည်း ဆင်းကဒ် ဝယ်လိုသူများက ရပ်ကွက် အလိုက် မြို့နယ်ရုံးသို့ လျှောက်လွာများကို ဖြည့်တင်ပြီး ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မဲစနစ်ဖြင့် ဆင်းကဒ်များ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ယနေ့ တရက်တည်းတွင်
လျှောက်လွှာ ၃,၀၀၀ ခန့် တင်ပြီးကြောင်း မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
“ဒီနေ့ကစပြီး လျှောက်လွာတွေ ပေးနေပြီ။ ၂၄ ရက်နေ့မှ အဖြေရမယ်လို့ ပြောတယ်။ လျှောက်လွာကို ကိုယ့် ရပ်ကွက် လူကြီးကနေ ယူ၊ ဖြည့်ပြီးတော့ မြို့နယ်ရုံးကို သွားတင်ရတယ်”ဟု မြစ်ကြီးနားမြို့ခံ ကိုဂွမ်ဆန့်အောင် က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
at 4/22/2013 09:03:00 PM No comments:
မိုက်မဲသောအစိုးရစစ်သား တစ်ချိူ့ကြောင့် ခရီးသည်များစိတ်ညစ်ရ
ကျွန်တော် ဒီညနေ မြစ်ကြီးနား ပြန်ရောက်သည်။ လွယ်ဂျယ်မှ ပြန်လာခဲ့သည်။ အစိုးရနှင့် KIO တို့ ဆွေးနွေးမှုများ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့ မှစ၍ဗန်းမော်- မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိ၍ ပြန်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗန်းမော်-လွယ်ဂျယ်ခရီးကို ဗင်ကား နှင့် စီးခဲ့ရာ စစ်တပ်ဂိတ် များစွာ ဖြတ်ခဲ့ရသည်။ အချို့ဂိတ်များ တွင် ယာဉ်မောင်း သတင်းပို့ခြင်းမှ အပစစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်းမရှိ၍ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသော အစိုးရတပ်ကိုချီးမွမ်းချင် စိတ်နှင့် မိုးမောက်မြို့သို့ ချဉ်းကပ်လာခဲ့သည်။
ပြသနာစပြီ။ မိုးမောက်မြို့ အ၀င်အောက်ချိုင့် ကဣိလ်ပင် ရိပ်တန်းအောက်တွင်အရပ်ဝ
တ်ဖြင့် လူ (၁၀) ဦးခန့် ကားတားသည်။ စွမ်းအားရှင်များလော၊ လက်ပါးစေများလော၊ သေချာမသိပါ၊ ခရီးသည် ပြည်သူတွေကို ကူညီသူများ မဟုတ်မှန်းတော့ သူတို့၏ မျက်နှာ၊ အမှုအရာများကြောင့် သိရသည်။ လူငယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ အရပ်ကောင်းကောင်း နှင့် လူတစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ထဲက ဓမြ ဗိုလ်စတိုင် နှင့် ကားရှေ့ခါးထောက်ရပ်ပြီး ခရီးသည်များ ကို သားကောင် ပမာ စူးစိုက် ကြည့်နေသည်။ တလောကလုံး သူ့ဆန်စား နေတဲ့ သူများ ဟုစိတ်ထင်နှင့် သွေးနားထင် ရောက်နေ တဲ့ ဂိုက်အပြည့်။ တပည့် လက်ပါးစေများ စတင်လှုပ်ရှား ကြသည်။ မှတ်ပုံတင် စစ်သည်။ လူကိုမေးသည်။ ကချင်ကို စပါယ်ရှယ် စစ်သည်။ လက်ဆွဲအိတ်များကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ စစ်သည်။ Glue Stick ဟုစာတန်းပါသော ကော်ချောင်းကို ပင်လျှာ နှင့် လျှက်ကြည့်သည်။ သနားစရာသကောင့် သားပေတည်း။ ပြည်သူကိုသရေခံ (တရားခံ) လိုဆက်ဆံသည်၊ ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းအရာမှာ စာသင်ကျောင်းနှင့် ကင်၊ ဝေးနေ ကြပုံများ။ ကိုယ့်မိဘ မောင်နှမများကို သူတို့လုပ်ပုံနဲ့များ ဆိုရင်နေသာပါ့မလား၊ ဒါတွေသူတို့ သိပုံမရ၊ အဏာပါးကွက်သား လုပ်ရာမှာ နေသား ကျပျော်မွေ့နေ ကြသည်၊ ပြုံးပျော်ချိန်ရှိ ပါ့မလား မပြောတတ်၊ ကျွန်အားရအောင် စစ်ပါသော်လည်း အပြစ်ရှာမတွေ့တော့ အီးနင်းမျက်နှာ နှင့် ပြန်လွတ်လိုက် ရသည်။ ခါးထောက်ရပ်နေသည့် သကောင့်သား ဂါမဏိ သဘောတွေ့ပုံမရ။
at 4/22/2013 09:00:00 PM 1 comment:
at 4/22/2013 10:12:00 AM No comments: